आमाको बिगौती दूध शिशुका लागि अमृतसमान, यसरी गराउनुस् स्तनपान | Hamro Doctor News
विश्व स्तनपान सप्ताह अहिले चलिरहेको छ । शनिवारदेखि सुरु भएको विश्व स्तनपान सप्ताह नेपालमा पनि मनाइँदै छ । आफ्ना शिशुलाई नियमित रुपमा ६ महिनासम्म स्तनपान गराउन प्रेरित गर्दै एक हप्तासम्म यो दिवस मनाउने गरिन्छ । तर, यो अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसैको ज्वलन्त उदाहरण बनिन् सिन्धुलिकी राधा पौडेल । उनी काठमाडौंमै बस्छिन् ।
तरपनि स्तनपान सप्ताहको बारेमा उनलाई थाहा छैन । “अस्पतालमा जादा डाक्टरले बच्चालाई दूध खुवाउनु भन्नुहुन्थ्यो तर मेरो समय नभएर बोटलको दूध खुवाए, मैले स्तनपान नगराउँदा मलाई नै के असर पर्छ भन्ने थाहा थिएन । ” पौडेलले भनिन्।
शिक्षित मानिएका अनि देशकै राजधानीमा बस्नेलाई त अझै स्नतपान बारेमा राम्रो ज्ञान छैन भने दुर्गम ठाउँमा रहेकाको अवस्था सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
– शिशु आनन्दले बसेको हुनुपर्छ ।
के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
६. बच्चाले दूध चुस्न नसके स्तन निचोर्नुपर्छ । नत्र डल्लो पर्ने, पाक्ने सम्भावना हुन्छ ।
८. सकेसम्म बोतलको दूध बच्चालाई खुवाउनु हुँदैन । खुवाउनै पर्ने बाध्यता भए चम्चामार्फत खुवाउनुपर्छ । किनकी बोतलको सरसफाई नपुगेमा बच्चालाई संक्रमण भई झाडापखाल भइरहने र संक्तमण हुनसक्छ ।
हर्मोनको गडबढीलाई सन्तुलन हन्छ ।
स्तनपानले शिशुका लागि स्वास्थ्य रक्षाको कामसमेत गर्दछ ।
नवजात शिशुमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुँदैन । उनीहरुले आमाको दूधबाट यो शक्ति प्राप्त गर्छन ।
यो तत्व थोरासिक डक्ट भनिने एक विशेष नलीबाट सिधै आमाको स्तनसम्म पुग्छ र दूधबाट बच्चाहरूको पेटमा पुग्दछ । यसरी शिशुहरु आमाको दूध नियमित रुपमा खाएर स्वस्थ रहन्छन ।
छदेखि आठ महिनासम्म शिशुहरूका लागि आमाको दूध जीवन रक्षक आहार मानिन्छ ।
केही मानिसमा स्तनपान गराउँदा सौन्दर्यमा ह्रास आउने, शरीरको तौल घट्ने, स्तनको आकार बिग्रने आदि गलत धारणाहरु रहेको पाइए पनि यो सत्य भने होइन ।
शिशुलाई स्तनपान गराउँदा आमालाई आत्मीयता र भावनात्मक सुखानुभूति हुनुका साथै गौरव महसुस हुन्छ । त्यसैगरी उनले मानसिक रूपमा आफू स्वस्थ भएको अनुभूति गर्ने हुनाले उनलाई आत्मसन्तुष्टि समेत प्राप्त हुन्छ ।
(मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनयराज भण्डारीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
Last modified on 2020-08-05 16:21:57